ဂျာမနီနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ရေလွှမ်းမိုးမှုတွင် လူ ၃၀ ဦးပျောက်ဆုံးနေ - Xinhua News Agency
နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ထားသူတစ်ဦး ဂျာမဏီနိုင်ငံ မြို့တော် ဘာလင်၌ လမ်းလျှောက်နေသည်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလကတွေ့ရစဥ် ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua)
ဂျာမနီနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း၌ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်ညတွင် အဆက်မပြတ်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် လူ ၃၀ ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ဂျာမနီနိုင်ငံ Rhineland-Palatinate ပြည်နယ် Schuld မြို့ ၌ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်ညတွင် မိုးကြီးမှုကြောင့် စုစုပေါင်း နေအိမ် ၆လုံး ပြိုကျခဲ့ကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်သူ့အသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း SWR ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယင်းဒေသရှိ အခြားနေအိမ် ၂၅ လုံးမှာ မတည်မငြိမ်မှု နှင့် ပြိုကျမှုအန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း နှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှု ပမာဏနှင့် ပျောက်ဆုံးမှုအရေအတွက်အတိအကျ မသိရှိရသေးကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောကြားချက်အား သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်နယ်၏ အချို့ဒေသများတွင် ဒေသခံပြည်သူများသည် အဘက်ဘက်မှရေလွှမ်းမိုးခံနေရသဖြင့် လေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးအား စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောထားပြီးဂျာမနီစစ်တပ် (Bundeswehr)အနေဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ Rhineland-Palatinate ပြည်နယ်နှင့် Saarland ပြည်နယ် တို့သည် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းနှင့်အတူ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် မိုးရေချိန် မများကြောင်း ဂျာမနီရာသီဥတုဝန်ဆောင်မှု DWD ၏ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
BERLIN, July 15 (Xinhua) — About 30 people are missing in western Germany afteraflood last night caused by continuous rainfall, local media reported Thursday.
A total of six houses collapsed in the town of Schuld in the German state of Rhineland-Palatinate during the past night, according to regional public broadcasting corporation SWR.
Another 25 houses in the area are in an unstable condition and at risk of collapse, with the extent of the damage and the exact number of missing yet unknown, the report quoted police as saying.
A low-pressure system with its center over Central Europe continues to make the weather in Rhineland-Palatinate and the state of Saarland in western Germany changeable, but no longer with widespread rainfall, according to the latest update by German weather service DWD on Thursday morning. Enditem